Vaovao - Andro famonoana afo nasionaly
Ny 9 Novambra no andro nasionaly mpamono afo an'i Shina. Ny maha-zava-dehibe azy dia ny fampandrenesana ny olona hanana fahatsiarovan-tena amin'ny fiarovana ny afo sy ho fahatsiarovana ireo maherifontsika mahery - mpamono afo.
Ny ALUTILE Brand All Dimensional Aluminium Core Panel dia misy sosona telo amin'ny takelaka aluminium, izay mandray ny teknolojia fifamatorana matotra sy tsy manam-paharoa, ary ny taham-pahavotan'ny herin'ny hoditra dia ambany noho ny 5% ao anatin'ny 20 taona.
Ny kilasy fanoherana afo dia mety hahatratra ny Fire Class A2 isaky ny GB8624-2012 SY EN13501, satria ny vokatra dia mandray firafitra Aluminium 100%. Vokatr'izany, ny mpanjifa dia afaka mahazo toky fiarovana azo antoka kokoa.
Ny Dimensional Aluminium Core Panel dia be mpampiasa amin'ny haingon-trano amin'ny rindrin'ny ambainy vy avo amin'ny tranobe ho an'ny daholobe sy ny varotra toy ny lalamby haingam-pandeha, lalamby hazavana ambanin'ny tany, tranombakoka, arisiva, ivon-toeran'ny fampirantiana, be pitsiny, birao ambony , hotely, sns.
ALUTILE Marika All Dimensional Aluminium Core Panel no mitondra ny fiarovana anao.